Wasiirka Qorshaynta Soomaaliya oo la kulmay bulshada ku nool degmada Dhahar (Sawiro) | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Wasiirka Qorshaynta Soomaaliya oo la kulmay bulshada ku nool degmada Dhahar (Sawiro)
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta iyo horumarinta maal gashiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo muddooyinkan socdaal ku marayay gobalada Sool iyo Sanaag ayaa maanta soo gaba-gabeeyey booqashadiisa.
Booqashada wasiirka ayaa ahayd mid qaadatay muddo Afar maalin ah.
Gaba-gabada booqashadiisa ayaa waxaa uu maanta gaaray degmadda Dhahar, isagoo halkaasi kula kulmay qeybaha kala duwan ee bulshadda Ku nool degmadaasi.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa bulshada Degmada Dhahar waxaa uu kula kulmay duleedka degmadaasi, isagoo warbixino ka hadlaya baahiyaha iyo nabad geliyada ka dhagaystay dadka deegaanka.
Wasiirka Qorshaynta iyo Horumarinta Maal gashiga Dowladda Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan oo lahadlayey bulshaddii degmadda dhahar kusoo dhoweysay, ayaa waxa uu shegay in dowladda federaalka Soomaaliya uu u gudbin doono natiijada socdalkiisa.
Wasiir Jamaal oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay u kuur galayeen xaaladda Nololeed ee ku sugan yihiin dadka ku nool deegaano iyo Tuulooyin ka tirsan Sool iyo Sanaag, amniga iyo hormarka ka jira.
Previous articleMaxaad ka taqaanaa 3-da wasiir ee maanta la magacaabay
Next articleSuudaan oo dib ugu yeeratay safiirkeeda Masar